Indlela yokufaka ikhondomu: ukufundisa, izinzuzo. Okufanele ukwenze uma ikhondomu idwengula
Indlela yokugqoka kahle ikhondomu
Ikhondomu iyindlela yokukhulelwa ephephile, ukuvikeleka okuthembekile kuphela ekutheleleni kwegciwane lesandulela ngculaza nezifo ezithathelwana ngocansi. Kodwa-ke, ikhondomu ingakwazi ukukhala noma ukuwa ngesikhathi sokuxhumana nomama - lokhu kuholela ekunciphiseni okubukhali ekusebenzeni kokubeletha. Ngokwezibalo, amakhondomu ahlaselwe ngamacala angu-2-6% kanti imbangela enkulu yegebe ukuhluleka ukuhambisana nemithetho yokusetshenziswa. Indlela yokugqoka kahle ikhondomu, ukunciphisa ingozi yokukhulelwa okungakahlelwe?
Izinkomba zokusebenzisa ikhondomu:
ukuvimbela ukutheleleka nge-HIV nama-STD;
ubulili obuyinqaba, noma / kanye nobudala bokubeletha ekupheleni;
indlela yesikhashana yokuvikelwa ngesikhathi sokumisa ekusebenziseni idivayisi ye-intrauterine noma amaphilisi e-hormonal;
Sebenzisa ngokuhlanganyela nezinye izindlela (indlela yesigqi).
ukusabela okweqile ku-latex, spermicides;
ukunciphisa okukhulu kokuzwela noma ukungasebenzi kahle kwe-erectile.
Izinzuzo zokusebenzisa ikhondomu:
ukufinyeleleka, ukulula, ukuvikelwa ezifweni zesisu;
kungenzeka ukuthi isicelo sokwelashwa kwe-allergies kuya kwesidoda kanye nokungabi nesifo sokuzivikela komzimba;
ukungabi khona kwethonya elihle emisebenzini yezakwethu;
ukuvimbela i-oncology yomlomo wesibeletho kubesifazane;
ukuvimbela i-ejaculation ngaphambi kwesikhathi.
Indlela yokusebenzisa ikhondomu ngendlela efanele
kudingekile ukuthi uhlole njalo ukupakishwa kwempilo yeshalofu kanye nosuku lokukhiqiza komkhiqizo, impilo yokuphefumula esiphelelwe yisikhathi - isizathu sokuphonsa ikhondomu;
Gcina ikhondomu endaweni epholile, izinga lokushisa eliphezulu libhubhisa i-latex;
Ngaphambi kokugqoka ikhondomu udinga ukutadisha ngokucophelela imiyalelo;
Iphakheji kumele ibe mahhala ye-punctures noma umonakalo. Amaphakheji ahlanganisiwe aqukethe ibhola elincane lomoya, uma lingekho, ikhondomu kufanele ilahlwe;
Kubalulekile ukuvula iphakheji ngokucophelela, uzama ukulimaza ikhondomu. Ungasebenzisi izikhali noma ezinye izinto ezibukhali;
indlela yokubeka kahle ikhondomu? Umkhiqizo ugqoke ipeni elimisiwe, ngaphambi kokungena kanye nanoma yikuphi ukuxhumana okuthinta izitho zangasese zomlingani. Okubalulekile: i-presen fluid iqukethe i-spermatozoa kanye nama-agent aphefumulayo;
Ikhondomu kufanele ihanjiswe ngendlela efanele: ibekwe ekhanda lepenisi, kulula ukuphuma futhi imboze ipeni. Beka iminwe yakho ngaphansi kwekhondomu akudingekile;
Ngaphambi kokuba ikhondomu ikhishwe, kuyadingeka ukuba ucindezele ukuphela kwekhondomu ngeminwe yakho bese ucindezela emoyeni. Uma lokhu kungenziwanga, umkhiqizo ungase uphule nge-ejaculation;
Ekupheleni kwekhondomu kumele kushiywe spermatheca - isikhala ngaphandle kwomoya;
ngemuva kokugcoba ikhondomu, khipha ikhondomu, ubambe ngokuqinile emaphethelweni eminwe yakhe, ngokudonsa ngomusa u-penis kusuka kumlingani we-anus / wesifazane. Emva kokukhipha ikhondomu esetshenziselwa ukufaka umthambo endaweni eqondile kusuka kumzimba womzimba womlingani bese ulahla;
lapho uxhumane nomuntu, amakhondomu avela kaningi, ngakho-ke kunconywa ukuthi usebenzise lubisi oluthe xaxa kwisisekelo se-silicone / amanzi;
Awukwazi ukugqoka kabili ikhondomu ye-latex, ukugqoka amakhondomu amabili ngesikhathi esifanayo.
Uma ikhondomu idwenguliwe
kungakapheli amahora angu-1-1,5 ngemuva kwesenzo socansi ukuhlanza urethra, i-penis, i-vagin, i-perineum ene-antiseptic - lokhu kuzosiza ekunciphiseni ukutheleleka. Ukusetshenziselwa okuvamile kwezidakamizwa akukhuthazwa, bayaphazamisa i-microflora futhi babulale amabhaktheriya we-pathogenic;
Uma ikhondomu iyindlela esemqoka yokuvikela, kufanelekile ukucabanga ngokuthatha ukukhulelwa okuphuthumayo - i-Escapela ne-Postinor. Ulwazi oluthe xaxa mayelana nezindlela eziphuthumayo zezindlela zokukhulelwa zingatholakala lapha.
Ngisho noma ozakwethu bekwazi ukugqoka ikhondomu bese bayisebenzisa kahle, kungabhidliza. Kulokhu, ngemuva kwezinsuku ezingu-30, hlola i-chlamydosis, i-trichomoniasis, i-gonorrhea, i-syphilis, emva kwezinyanga ezingu-3-ukudlulisa ukuhlolwa kwe-hepatitis C / V ne-HIV. Uma omunye wabalingani enesandulela ngculaza, lo mbhangqwana kufanele uxhumane neSikhungo Sokuvimbela Ingculazi sokuvikela ukuvimbela i-HIV emva kokubambisana.
Ukwelashwa, uhlelo lwe-intrauterine hormonal
Izindlela zokukhulelwa eziphuthumayo: yiziphi izakhi zokukhulelwa ezithatha ubulili
UClaira yindlela yokuvimbela ngokwethenjelwa nge-estradiol
Amabhisikidi ase-Italy namakhiwane
Amazambane ahlambulukile nge-Parmesan ushizi nenyama
Izingxoxo eziphumelelayo zilula
Izimbangela zokuhaha nezinkathazo ezinganeni nokufundiswa kokuhaha
Isaladi nge utamatisi kanye noshizi
Imilenze emifushane ezinyangeni ezimbalwa nje, noma ukuzivocavoca okulula "Isitoreji"
Ukwelashwa kwe-schizophrenia ngamakhambi abantu
I-Horoscope ye-Love for 2015 ye-Gemini
Ukubuyiselwa ngemuva kokuqedela kabusha